Girmaa Waldagiyoorgis: 'Qaroo ijaa isaanii kennuun siidaa ifaa dhaabanii darban' - BBC News Afaan Oromoo
Girmaa Waldagiyoorgis: 'Qaroo ijaa isaanii kennuun siidaa ifaa dhaabanii darban'
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Obbo Girmaa Waldagiyoorgis dhaabota tola ooltummaa hudeessuutii hanga hogganuutti maqaa gaarii qabu.
Kibxata darbe sirni awwaalaa isaanii kan raawwate Obbo Girmaan qaroon ijaa isaanii Baankii Ijaa Itoophiyaaf arjoomamee jira.
Baankii Ijaa Itoophiyaa kan hundeessan Obbo Girmaan, waggaa 15 dura yeroo hojii jalqabu eebbisanii yoo banan ija isaanii akka arjooman waadaa seenanii ture.
''Agartuu ijaa isaanii du'aan booda kennuuf waadaa seenuun isaanii namooti kaanillee akka arjoomaniif kaka'umsa ta'ee turee jedhu Baankii Ijaa Itoophiyaatti to'attuu dhimma teeknikaa kan tahan siistar Liyaa Tikaaboo.
Baankiin ijaa Itoophiyaa qaroo ijaa walitti qabuudhaan qulqullinni isaa eegamee lammileen agartuu ijaa isaanii dhaban wallaansa agartuu jijjiiruu akka argataniif gargaara.
Obbo Girmaan baankicha gama jajjabeessuutin mana maree afooshaa Finfinnee wajjiin akka hojjetan garaagaaruu Siistar Liyaan ni dubbatu.
''Namni tokko addunyaa kanarraa yeroo godaanu siidaa ifaa dhaabee deemuu akka danda'u akka barsiisnu gama baayyeen nu deeggaraa turanis'' jedhu.
Yaadannoo waggaa 15ffaa baankichaa irrattillee argamuun artistoota beekamoo waliin tahuun ija ofii erga du'anii booda arjoomuu jajjabeessanii, namoonni waa'ee dhimmichaa hubannoo akka qabaataniif tumsaa turan jedhu.
Baankiin ijaa Itoophiyaa sadarakaa Afrikaatti, Afrikaa Kibbaatti aanee lammatarra kan jiru tahuufi qaroo ijoo qulqullinaan sassaabuufi kuusuudhan namoota godaannisa qaroo ijaa qabaniif akka raabsu adde Liyaan BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee baankichi wal-aansa ijaa hin kennu.
Yeroo nama du'eerra qaroo arjoomame fudhatus ija namaa guutumman baasuu otoo hin taane ''daawwitii ijaa fuuldura jirtutu baha'' ergasii buufatawwan wal-aansichi kennamuuf raabsina jedhu.
Siistar Liiyaan Obbo Girmaa Waldagiyoorgis wayita boqotanitti qaroo ija isaanii akka fudhatan, kanaanis pireezidaantichi ''qaroo isaanii lamaan kennudhaan namooti lama ifa akka argan godhaniiru kunimmoo kennaa hunda caalu'' jedhan.
Obbo Girmaan ija isaanii du'a booda arjoomuudhaaf waadaa seenuun nama jalqabaa taa'uu isaaniis himan.
Namoota qaroo ija isaanii kennuuf otoo waadaa hin galiin du'an maatiifi namooti dhihoo isaanii yoo eeyyaman baankichi fudhachuu akka danda'u hospitaalotatti tajaajila gorsaa kenna jedhu.
Daqiiqaa 33 dura